सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आउन अझै बाँकी छः कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्ष काफ्ले – Nirantarkhabar
स्थानीय तहको निर्वाचन संपन्न भएको झण्डै २ बर्ष पुग्न लागेको छ । निर्वाचनको समयमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनिन्थ्यो धेरै काम स्थानीय तहबट सन्चालन भएका छन तर पनि ऐन कानुन बनिनसकेको अवस्थामा अहिलेको समयलाई संक्रमणकालिन समय मान्न सकिन्छ । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा पनि यो समयअवधिमा धेरै बिकासका धेरै कार्य सन्चालन भएका छन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष तारा बहादुर काफ्लेसँग गरिएको कुराकानी ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको झण्डै २ बर्ष वित्न लागेको छ । यो अवधिमा गाउँपाललिकामा के के परिवर्तन भए ?
निर्वाचनपछि गाउँपालिकामा बिकासका कामहरु भइरहेकाछन । २२ वटा पक्की कलभर्ट, ३५ देखि ४० लाखका ४ वटा पुल, लगभग ४.५ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे, केही विद्यालय तथा संघसंस्थाहरुलाई रकम उपलब्ध, ५६ किलोमिटर बाटो ग्रावेल, १४.५ किलोमिटर नयाँ ट्«याक, बर्थीङ सेन्टरमा सुन्केरी गाराउने प्रविधि, बिराट मेडिकल कलेजसँगको सहकार्यमा गाउँपालिकामा महिनाको एक दिन एम.बि.बि.एस, अर्थोपेडिक, जेनेरल फिजिसियन, प्रसुति सम्बन्धि सेवा सन्चालन लगायतका धेरै काम गाउँपालिकामा संपन्न भए ।
चुनावताका गरिएका प्रतिबद्धतापुरा हुन अब कति बाँकी छन ?
घोषणपत्रमा भएका प्रतिबद्धताहरु केहि पुरा भएका छन भने केही हुने क्रममा रहेका छन । अव्यबस्थित बसोबासलाई व्यबस्थित बनाउने कार्य, केन्द्र, प्रदेश हुदै स्थानीतहले गर्नुपर्ने भएकोले केहि अल्झिएको छ तर काम प्रारम्भ भएको छ । जनता आवास कार्यको कोसिस थालिएको छ । बिकासनिर्माणका कार्यहरु सन्चालन हुदैछन ।
चुनावको समयमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनिन्थ्यो । गाउँपालिकाका जनाताले महसुस गरेका छन ?
त्यतिबेला सबै नेताहरुले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनिएको हो तर अहिले संक्रमणकाल चलिरहेको छ । स्थानीय तहले पाएका केही अधिकारहरु संघले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । उदाहरणका लागी माद्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको हो । शिक्षा ऐन २०४८, शिक्षा नियमावली २०६९ जारी छ । तर संघिय सरकारले ऐन संविधानमै नभएको शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई बनाएर संघले हस्तक्षेप गरेको छ ।
संघिय ऐन नबनि प्रदेश ऐन नबन्ने र प्रदेश ऐन नबनि स्थानीय सरकारले ऐन बनाउन नमिल्ले भएकोले अहिलेसम्म ६०–७० प्रतिशत सम्म सिंहदरबारको अधिकार आएपनि अन्य भने आउन बाँकी नै छ ।
गाउँपालिका समृद्धीका लागि के कस्ता समस्याहरू छन् ?
मूल बिषय भनेको त कृषी नै हो, परम्परागत कृषीलाई आधुनिकिकरण गर्नुपर्छ । भौतिक पुर्वाधार पनि अर्को समस्या हो । गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय स्थानहरुको बिकास गर्न सके पर्यटकहरु भित्र्याउन सकिन्छ ।
गाउँपालिकाभित्र रहेका पर्यटकीय स्थानहरुको बिकासका लागि गाउँपालिकाले के गर्दैछ ?
३ वटा सिमसारको डिपिआर तयार हुदैछ । भुल्के सिमसारलाई प्रदेश सरकारले १५ लाख बजेट छुट्याएको छ त्यसलाई गाउपालिकाले पनि थप गर्नेछ । सिमसारको संरक्षण गर्नसके सिचाइ, खानेपानी, धार्मीक तथा पर्यटक भित्र्याउने संभावना हुन्छ ।
भषा,कला, साहित्य, संस्कृती, खेलकुद लगायतको क्षेत्रमा गाउँपालिकाले के गर्छ ?
यी बिषयहरुमा गत बर्ष र यो बर्ष पनि गाउँपालिकाले २०÷२० लाख बजेट छुट्याएको छ । भाषा र संस्कृति संरक्षण गर्न लिम्बु भाषा र लिपीसँग सम्बद्ध ५९ जनालाई ३÷३ महिने कक्षाबाट दिक्षित गर्ने कार्य भएको छ यसलाई निरन्तरता दिइनेछ । कला साहित्यसँग गाँसिएका प्रस्तावहरु आएमा गाउँपालिकाले उदारतापुर्वक सहयोग गर्नेछ ।
निर्वाचनका समय तपाईको बिपक्षमा रहेकाहरुले गाउँपालिकाको बिकासमा कस्तो सहयोग गर्छन र तपाईले कसरी समेट्नुहुन्छ ?
वहाँहरुपनि सहयोगि हुनुहुन्छ । सहयोग गर्नुहुन्छ ।
गाउँपालिका समृद्धीकालागि अबका योजनाहरुमा कुन बिषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ?
बेरोजगारीको समस्या हटाउनका लागि सीपविकास तालिम मार्फत रोजगारीको व्यबस्था मिलाउने । गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक बिद्यालयहरुको स्तरिकरण गर्ने, स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने त्यसपछि भौतिक पुर्वाधारको कुरा आउछ यस्ता बिषयमा हामिले ध्यान दिनुपर्छ ।
अबको ३ बर्ष पछि तपाइको कार्यकाल सकिदैगर्दा कानेपोखरी गाउँपालिका कस्तो बन्ला ?
ऐन, कानुन, निमहरु व्यबस्थित हुनेछन, प्रत्येक घरबाट एम्बुलेस चढेर उपचार गर्न जान सक्नेगरीको बाटो हुनेछ, २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनेछ, शैक्षिक सुधार हुनेछ । बाहिरका मानिसले हेर्दा कानेपोखरी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार राम्रोछ भन्ने वातावरण बन्नेछ ।
प्रस्तुतीः अनिल बराल
मेयरकपमा वडा नं ११ बिजयी